आज २०७७ कार्तिक १९ गते बुधवार को राशिफल
अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति १९ कार्तिक २०७७, बुधबार ०६:४९
बि.सं. २०७७ कार्तिक १९। बुधवार। इ.सं.4November 2020 । शक संवत १९४२ । नेपाल संवत ११४० कौलाथ्व । प्रमादी । दक्षिणायन । शरद ऋृतु । कार्तिक कृष्णपक्ष। तिथि चतुर्थी , २६:११ बजे उप्रान्त पञ्चमी नक्षत्र मृगशिरा , २७:०३ बजे उप्रान्त आर्द्रा योग परिघ ०६:२९ बजेदेखि शिव , ३०:०९ बजे उप्रान्त साध्य करण वव १३:४१ बजेदेखि वालव , २६:११ बजे उप्रान्त गर चन्द्रराशि वृष । आनन्दादी योग अमृत । दिनमान २७:२६ पला । सूर्योदय ०६:१७बजे । सूर्यास्त बेलुका १७:१६
चतुर्थी, कार्तिक कृष्णपक्ष
संकटको समयमा विशेष गरी आफ्नो धैर्य नगुमाउनुहोस्। आज तपाईंले अरूको आवश्यकतामा ध्यान दिनु पर्छ तर बच्चाहरुसँग अतिरिक्त उदार हुनाले मात्र समस्या बढ्नेछ। आफ्नी प्रेमीकाको उट्पट्याङ्ग व्यवहारले तपाईंको मुड उदास बनाउन सक्छ। तपाईं आफ्नो योजना बारे खुल्ला हुनुहुन्छ भने आफ्नो परियोजना नष्ट गर्नुहुनेछ। तपाईंको व्यस्त तालिकाको कारण तपाईंको जोडीले आज आफुलाई महत्वहीन महसुस गर्न सक्छ, र साँझमा अप्रसन्न भएको देखाउन सक्छ।
आफ्नो मनमा सकारात्मक विचार ल्याउनुहोस्। दीर्घ अवधिको आधारमा तपाईंले लगानी गर्नुभयो भने पर्याप्त लाभ हुनेछ। भेटघाट गर्ने अतिथिहरूले सांझ बिताउनेछन्। तपाईंका जोडीका परिवारका सदस्यहरूको रुकावटको कारण आजको दिन केही कष्टपूर्ण हुन सक्छ। आज आफ्नो जोडीले कठिन परिस्थितिमा तपाईंलाई सहयोग गर्नमा धेरै चासो नदेखाउन सक्छन्।
व्यस्त समय भए तापनि स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। बच्चाहरुले आफ्नो उपलब्धिले तपाईंलाई गर्व महसुस गराउनेछन्। सामाजिक बाधाबाट छुटकारा पाउन असमर्थ। क्यारियरमा अझै प्रगति गर्न नयाँ सीप र प्रविधीको लागि अनुकूल हुनु आवश्यक हुनेछ। आज तपाईंले किनमेल गर्न जानुभयो भने आफैलाई राम्रो पहिरन सामाग्री छनोट गर्न सम्भावना छ। तपाईंको वैवाहिक जीवनलाई आज केही ठाउँ चाहिन्छ।
तपाईंको दिने मनोवृत्तिको फल प्राप्त हुनेछ किनकि तपाईं शंका, निराशा, विश्वासको कमी, लोभ, आसक्ति, घमण्ड र डाह जस्ता धेरै दोषबाट मुक्त हुन सक्ने सम्भावना छ। अनपेक्षित बिलले आर्थिक बोझ बढाउनेछ। बच्चाहरुले अझ बढी हेरविचारको माग गर्नेछन् – तर तिनीहरूले सहयोगी र मायालु व्यवहार गर्नेछन्। आफ्नो प्रियसँग तपाईंको व्यक्तिगत भावना / रहस्य साझेदारी गर्ने यो सही समय होइन। लघु अवधिका कार्यक्रममा आफुलाई संलग्न गर्नुहोस् जसले तपाईंलाई नवीनतम प्रविधिहरू र कौशल सिक्न मद्दत गर्नेछ। आफ्नो जोडीको अशिष्ट व्यवहारले आज तपाईंलाई केही कष्ट हुन सक्छ।
आशावादी भएर उज्यालो पक्षतर्फ हेर्नुहोस्। तपाईंको विश्वस्त आशाले तपाईंको इच्छा र चाहनाको बोधका लागि ढोका खोल्नेछ। तपाईंको जोडीसँग आफ्नो गोप्य जानकारी साझेदारी गर्नु अघि सोच्नुहोस्। यदि सम्भव छ भने नभन्नुहोस् किनकि उनले अरू कसैलाई यो कुरा भन्न सक्छिन्। प्रेममा भएको निराशाले तपाईंलाई निरुत्साहित गर्ने छैन। तपाईंको विश्वास बढ्दैछ र उन्नति स्पष्ट छ। एउटा सानो कुरा भए तापनि, तपाईंका जोडीले ढाँट्नाले आज तपाईंलाई दुख हुन सक्छ।
आशावादी भएर उज्यालो पक्षतर्फ हेर्नुहोस्। तपाईंको विश्वस्त आशाले तपाईंको इच्छा र चाहनाको बोधका लागि ढोका खोल्नेछ। विशेष गरेर प्रमुख वित्तीय सम्झौतामा बातचीत गर्दा, हतारमा निर्णय नलिनुहोस्। पत्नीका मामिलाहरूमा तपाईंको हस्तक्षेपले उनलाई उन्मादी बनाउन सक्छ। रीसबाट जोगिनको लागि उनको अनुमति लिनुहोस्। तपाईं सजिलैसँग समस्याबाट जोगिन सक्नु हुनेछ। तपाईं आफ्नो समूह भित्र घुम्नुभयो भने विशेष कसैको आँखा फेला पार्नु हुनेछ। सबै कुराहरू नपढीकन कुनै पनि व्यापार / कानुनी कागजातमा हस्ताक्षर नगर्नुहोस्। आज तपाईंले महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। वैवाहिक जीवनको एउटा कठिन चरण पछि, तपाईंले आज रमाइलो दिन पाउनु हुनेछ।
तपाईं आफैंलाई राम्रो बनिएको महसुस गराउनको लागि काम गर्ने अद्भुत दिन। आफ्नी पत्नीसँग सम्बन्ध बनाउने धेरै राम्रो दिन हो। एउटा परिवारमा संलग्न दुवै मानिसहरू प्रेममा पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र आफ्नो सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो पार्नुपर्छ। जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहोस् र सकारात्मक रूपमा कुराकानी गर्नुहोस्। प्रेममा मग्न भएकाहरूले प्रेमको संगीत सबै समय सुन्दछन्। आज तपाईंले यो संसारका सबै गीतहरू भूल्ने त्यो संगीत सुन्नु हुनेछ। आज यात्राको लागि धेरै राम्रो दिन छैन। तपाईंको जोडी आज रमाइलो मुडमा छन्, तपाईंलाईले उनलाई आवश्यक सबै सहयोग दिएर आजलाई आफ्नो वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बनाउन उनलाई मद्दत गर्नु पर्नेछ।
आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न पुनः सुरु गर्नको लागि सर्वश्रेष्ठ दिन। परिवारको गोप्य समाचारले तपाईंलाई आश्चर्य बनाउन सक्छ। आज आफ्नो प्रियको भावना बुझ्नुहोस्। तपाईंको आज सबै काममा राम्रो हात पर्न सक्छ। एउटा सानो प्रयासले, आजको दिन तपाईंको वैवाहिक जीवनको सबैभन्दा राम्रो दिन बन्न सक्छ।
बोल्नु अघि दुई पटक सोच्नुहोस्। अनजानमै तपाईंको दृष्टिकोणले कसैका भावनाहरूमा चोट लाग्न सक्छ। साथी तथा आफन्तहरूलाई आफ्नो राय जबरजस्ती नथोप्नुहोस्, किनकि यो तपाईंको नहुन सक्छ र तपाईंदेखि तिनीहरू अनावश्यक रूपमा रिसाउन सक्छन्। कसैको नयाँ रोमान्सले तपाईंको आत्माको उत्थापन गर्दछ र तपाईंलाई खुसीको मुडमा राख्छ। तपाईंले आफ्नो विचार राम्ररी प्रस्तुत गर्नुभयो र काममा आफ्नो सङ्कल्प र उत्साह देखाउनु भयो भने – तपाईंलाई फाइदा हुने सम्भावना छ। यो दिन आफ्नो वैवाहिक जीवनको लागि साँच्चै ठूलो छ। आफ्नो साथी थाहा छ तपाईं उहाँलाई प्रेम कति गरौं।
तपाईंलाई ढाक्ने र तपाईंको प्रगतिमा बाधा गर्ने दुःखलाई टाढा फ्याँकिदिनुहोस्। समस्या घर अगाडि नै बढ्दैछ, यसैले तपाईंले ध्यान दिएर बोल्नु पर्नेछ। प्रेमको परमानन्द अनुभव गर्न कोई फेला पार्न सक्नुहुनेछ। आज गरेको लगानी आकर्षक हुनेछ तर तपाईंले साझेदारहरूबाट केही विरोध हुन सक्छ। आफ्नो जोडीको स्वास्थ्यले तपाईंलाई चिन्तित राख्न सक्छ।
तपाईंले लामो समयदेखि अनुभव गरिरहेको जीवनका तनाउ र खिचलोबाट राहत प्राप्त गर्नु हुनेछ। यिनीहरूलाई स्थायी रूपमा निकाल्न तपाईंको जीवन शैली परिवर्तन गर्ने सही समय हो। तपाईंले बचत निवेशमा आफ्नो बचत राख्नुभयो भने तपाईंलाई राम्र फाइदा हुनेछ। दिन संगठित तरीकाले संचालन गर्नुहोस् – आफुलाई मद्दत माग्नको लागि विश्वास गर्न सक्ने मान्छेसँग कुरा गर्नुहोस्। प्रेम सधैं आत्मीय हुन्छ, र तपाईंले यसलाई आज अनुभव गर्नु हुनेछ। नयाँ विचारहरू फलदायी हुनेछन्। तपाईंले आफुलाई दुनियामा सबैभन्दा धनी महसुस गर्नु हुनेछ किनकि तपाईंको जोडीले तपाईंलाई त्यस्तै व्यवहार गर्नेछन्।
वाहन चलाउँदा र विशेष गरेर घुमाउरो बाटोमा होसियार हुनुहोस्। कसैको लापरवाहीले तपाईंलाई समस्यामा पार्न सक्छ। तपाईंको मनमा दबाब छ भने – आफन्तहरू वा घनिष्ठ मित्रहरूसँग कुरा गर्नुहोस् – यसले तपाईंको टाउकाको भारी कम गर्नेछ। तपाईंसँग बिताएको राम्रो समयको याद दिलाएर आफ्नो मित्रताको नवीकरण गर्ने समय। अझै पनि कामको खिचलोले तपाईंको मन बेह्रेको छ र परिवार र साथीहरूको लागि कुनै पनि समय निस्किन सकेको छैन। तपाईंलाई आफ्नो जोडीले विशेष ध्यान दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
बिक्रम बानियाँको नेतृत्वमा बनस्खण्डी युवा क्लब गठन
आज २०७७ चैत २८ गते शनिवार, हेर्नुहोस् तपाइको आजको राशिफल